Puntland waxaan uga digayaa in mudadda kaadh qaadashadu socoto aanay na carqaladaynin” wasiirka daakhiliga Somaliland | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Puntland waxaan uga digayaa in mudadda kaadh qaadashadu socoto aanay na carqaladaynin” wasiirka daakhiliga Somaliland
Hargaysa (SDWO): Wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Yaasiin Maxamuud Xiir (faratoon), ayaa digniin u diray maamulka Puntland iyo kooxo nabad-diid ah in ay isku dayaan falal ay ku carqaladaynayaan mudadda ay kaadh qaadashadu ka socoto goboladda Sool iyo Sanaag.
Waxaanu sheegay in aanay maamulka Puntland iyo koxaha nabad-diidka ka ogolaan doonin isku day kastoo ay ku waxyeelaynayaan kaadh qaadashadda iyo nabadgeliyadda degaamadda bari ee goboladda Sool iyo Sanaag.
Faratoon, ayaa si gaar ah fariin ugu diray maamulka Puntland in sidii marar hore dhacday aanay wax dhibaato ah samaynin degaamadda bariga Somaliland iyo sidoo kale kooxo nabad-diid ah oo uu sheegay in ay qalalaase ka wadaan degaamadaasi.
Wasiir Faratoon, oo hadal ka jeediyay munaasibad maanta lagu qabtay magaaladda Laascaanood taasoo qayb ka ah diyaar garowga loogu jiro qaadashadda kaadhka codbixinta ee Sabtida soo socota ka bilaabmaysa Sanaag iyo Sool, ayaa carabka ku adkeeyay in looga baahan yahay shacabka goboladaasi in ay ka shaqeeyaan sidii la isaga kaashan lahaa ilaalinta nabadgeliyadda.
Isagoo arrimahaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Ka Wasiir arrimo guddo ahaan, waxaan ku dhawaaqayaa in mudadda ay kaadh qaadashadu socoto iyo wixii ka danbeeyaba in aynu kuligeen ka wada shaqayno sidii aynu nabadgeliyadda u wada ilaalin lahayn. Nabadgeliyadda cid carqaladaysa ma yeelayno, kana aqbali mayno.
Waxa jira meello badan oo marar badan ay carqalado inagaga iman jireen, gaar ahaan xiliyadda aynu diiwaangelinta ku jirno ama doorashooyinka ku jirno, arrimahaas cidii ku kacda u dul qaadan mayno, nabadgeliyadana waanu ilaalinaynaa, xoog ayaanu saaraynaa, waanan ka foojignaanaynaa, waanan u diyaar garoobaynaa”.
Geesta kale wasiirka daakhiliga Somaliland waxa uu sheegay in masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo ay dhawaan kulan yeesheen in ay isla af-garteen in aanay dhinacoodda uga iman waxyaabo carqaladaynaya mudadda ay kaadh qaadashadu socoto.
“Puntland waxaanu u sheegaynaa, oo aanu hore-na uga wada hadalnay, oo aanu wanaagsana isula af-garanay dhawaan mar aanu is-aragnay, in ay arrintaa ilaaliyaan. In mudadda aynu kaadh qaadashadda ku jirno sidii hore u dhici jirtay aanay dhicin in ay na carqaladeeyaan”ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha Somaliland.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi “Waxa kale oo jira kooxo falaago ah, oo aynu og nahay in ay meello degaamadeena ka mid ah joogaan, gaar ahaana dhinaca bariga.
Kuwaa falaagadda ahna waan u digaynaa, kama daba hadhi doono, mana nabadgelin doono, meel kastoo ay galaanba waan kaga daba tegaynaa. Waxaanan uga digaynaa in ay arrinta kaadh qaadashadda wax carqalad ah ku sameeyaan”.